चिया निर्यातमा ह्रास
उर्लाबारी, जेठ २७ गते । पूर्वाञ्चलबाट हुने कृषि वस्तुको निर्यात विगत केही वर्षयता क्रमिक रूपमा घटिरहेको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका अनुसार आ.व. २०७०/७१ मा नेपालबाट कुल ३७ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख ५० हजार ९९४ रुपियाँँको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको थियो । आ.व. २०७१/७२ मा निर्यात भएको कृषिजन्य वस्तुको मूल्य ३३ अर्ब २८ करोड ६६ लाख ३६ हजार ९५७ रुपियाँँ थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.व. २०७१/७२ को निर्यात साढे चार अर्ब रुपियाँँले कम हो ।
यसैगरी, आ.व. २०७२/७३ मा अघिल्लो वर्षभन्दा साढे सात अर्ब रुपियाँले कमी आएको थियो । कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार २०७२/७३ मा २६ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख ८६ हजार ८७३ रुपियाँँको मात्र कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनाको निर्यात व्यापारसमेत सन्तोषजनक नरहेको कार्यालय प्रमुख कृष्ण रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो अवधिमा १२ अर्ब ८० करोड ४५ लाख छ हजार ९९५ रुपियाँँको निर्यात भएको छ । यही दरमा निर्यात हुने हो भने बाँकी छ महिनामा २५ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा निर्यात व्यापार हुने रेग्मीको भनाइ छ ।
नेपालबाट भारत र तेस्रो देश निकासी हुने सामग्री तथा वस्तुमा चियाजन्य वस्तुले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । २०७२÷७३ मा चियाजन्य वस्तुको निर्यात सात अर्ब १६ करोड ८१ लाख २१ हजार १८२ रुपियाँँ रहेको छ । यो कुल निर्यातको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
ग्रिन टी, कालो चिया, तेजपात, चिया मसला र कफीको निर्यातसमेत आ.व. २०७०/७१ को तुलनामा २०७१/७२ मा घटेको थियो । सो वर्ष चियाको मात्र पाँच अर्ब ९९ करोड १६ लाख ५९ हजार ७१३ रुपियाँँको चिया निर्यात भएको थियो ।
चियाजन्य वस्तुको निर्यात हिस्सा बढी नहुने हो भने परनिरर्भता झनै बढ्ने रेग्मीको भनाइ छ । उहाँ भन्नुभयो, चिया, अलैँची, अम्लिसोको निर्यात बढेको छ । चियाको व्यापार भारत, पाकिस्तान, रसिया, जर्मनी, फिलिपिन्स, निकारागुवा, नामिवियासम्म विस्तार भएको छ तर चियाजन्य कृषि उत्पादनमा सरकारले लगानी नबढाउने हो भने निर्यात अझै खुम्चिने देखिन्छ ।